siifsiin_ – Page 17 – siifsiin
Fayidaa tola oltumma kannen beektu?
Yeroo boqonna keessani maal hojjachuun dabarsitu? Kessattuu barattoonni yeroo ganna kana hojii tola ultummaa hojachuun yoo dabarsitaan bu’alee armaan gadii ni argatu jedha maddi tokko. 1. Maliif hojii tola oltumma hojjadha? Hojii tola oltummaa namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsa kennu dha.Bu’aan isaa garuu siif dachaa kana caalaa.Hojii tola ultumma dhiphina samuu hir;isuuf, yaadoo hir’isuuf, samjuu keenya … Continue reading Fayidaa tola oltumma kannen beektu?
Ergaam Makmaasa kunneeni maali?
1. Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiisatiini. 2. Bishaan lagaa wal hin eegu 3. Bitaan korii mirgaan korii walgeettiin koora dha 4.Wama qalte qalii tirumaan naaf gali jette jaartiin 5. Biyya FARDI hin jirre HARREEN garmaamti/saggaarti 6. Biyya ofiitti Lukkuun korma 7. Sangaan biyya ofiitti baroodu biyya ambaatti ni mar’ata 8. Biyya abbaa kootiiiti jedhee … Continue reading Ergaam Makmaasa kunneeni maali?
Magaala Naqamten wal-baraa!
Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. Magaalaan Naqamte naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa kessatti argamti. Iddon itti argama ishee ol ka’iinsa lafaa meetira 2,088 kan qabu yoo ta’u latitude fi longitude 905’N 36033E qaba. Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti. Naqamte magaalaa guddoo Kutaa Bulchiinsaa Wallaggaa kan durii kan turte yoo ta’u amma immoo magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaati. Akka lakkoofsa uummata bara … Continue reading Magaala Naqamten wal-baraa!
Ifee as qaari’ee Turee turee ifni ba’ee Gaariin dhufee tole je’ee Aduun barii bahee hoo’ee Dhiibee dhiibee dhdhiibee Kan hoollatu harka qabee Sobni dhufus dhugaan yoom dhabee Kan inaaftu harki cabee Ta’ee ta’ee dubbatamee Booruuf qarruuun wal makamee Otoo taa’uu bulbulamee Nibari’e unkuramee Tulluun lafaa ol-fagaatee Barii dhoowwuf karoorfatee Tabba tabbaan wal- filatee Nibari’e injifatee … Continue reading Bari’e
June 18, 2019 September 18, 2019 Leave a comment
Beekumsi karaa adda addaatiin ilaalama. Kaan akka waan hubatamee itti jiraatamumaraatti fudhata. Gariin ammoo, adeemsa saayinsa waan wal-qabsiisa. Namoonni bu’uura ogummaati jedhanis jiru. Marti isaan iyyuu tajaajila isaarratti xiyyeeffatan. Hiikni kennamu hamma fedhe baay’atulle, kal-heddee (multidimensional) ta’uu fi jireenya hawaasaatiif gumaachuun isaa hubatamuu qaba. Maddi beekumsa kanaa maali? Gaaffiin jedhu garuu deebii barbaada. Maddi … Continue reading Beekumsa